Numeri 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Aaron mma (1-4)
Onyankopɔn yii Lewifo sɛ wɔnsom (5-39)
Wotuaa agyede de gyee mmakan (40-51)
3 Eyinom na na wɔyɛ Aaron ne Mose asefo,* da a Yehowa ne Mose kasae wɔ Sinai Bepɔw so no.+ 2 Aaron mma din ni: Nadab, a ɔyɛ ne ba panyin, ne Abihu,+ Eleasar,+ ne Itamar.+ 3 Eyinom ne Aaron mma a wɔsraa wɔn hyɛɛ wɔn* asɔfo sɛ wɔnyɛ asɔfodwuma no.+ 4 Nanso Nadab ne Abihu wui wɔ Yehowa anim bere a wɔde ogya foforo bi a Yehowa mmaa ho kwan bɔɔ afɔre+ wɔ Sinai sare so no; ná wonni mma biara. Nanso Eleasar+ ne Itamar+ de, wɔkɔɔ so ne wɔn papa Aaron yɛɛ asɔfodwuma no. 5 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 6 “Fa Lewi abusuakuw+ no bra, na fa wɔn begyina ɔsɔfo Aaron anim, na wɔmmɛboa no.+ 7 Wɔbɛyɛ ahyiae ntamadan no ho adwuma de aboa Aaron na wɔde asom asafo no nyinaa wɔ ɔsom ntamadan no anim. 8 Wɔnhwɛ ahyiae ntamadan no mu nneɛma nyinaa so,+ na wɔnyɛ ɔsom ntamadan no ho adwuma mfa nsom Israelfo no.+ 9 Fa Lewifo no ma Aaron ne ne mma. Wɔde Lewifo no ama no. Wɔayi wɔn afi Israelfo mu ama no.+ 10 Na yi Aaron ne ne mma ma wɔnyɛ wɔn asɔfodwuma.+ Obiara a wɔmmaa no kwan sɛ ɔnyɛ bi* no, sɛ ɔbɛn hɔ a, munkum no.”+ 11 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 12 “Hwɛ! Me de, mayi Lewifo afi Israelfo mu sɛ wonsi Israelfo mmakan* nyinaa anan.+ Enti Lewifo bɛyɛ me dea. 13 Efisɛ abakan biara yɛ me dea.+ Ɛda a mikum Egypt asaase so mmakan nyinaa no,+ mihyiraa mmakan a wɔwɔ Israel nyinaa so fae, nnipa ne mmoa mmakan nyinaa.+ Enti wɔbɛyɛ me dea. Mene Yehowa.” 14 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose wɔ Sinai sare so+ sɛ: 15 “Kyerɛw Lewifo no din na hu nnipa dodow a ɛwɔ wɔn agyanom abusuafi biara mu ne wɔn abusua biara mu. Kyerɛw ɔbarima a wadi bosome baako rekɔ biara din.”+ 16 Enti Mose tiee ahyɛde a Yehowa de mae no, na ɔkyerɛw wɔn din sɛnea ɔka kyerɛɛ no no. 17 Lewi mma din ni: Gerson ne Kohat ne Merari.+ 18 Gerson mma a wɔn din da wɔn mmusua so ni: Libni ne Simei.+ 19 Kohat mma a wɔn din da wɔn mmusua so ne Amram, Yisar, Hebron, ne Usiel.+ 20 Merari mma a wɔn din da wɔn mmusua so ne Mahli+ ne Musi.+ Eyinom ne Lewifo mmusua no ne wɔn agyanom abusuafi. 21 Mmusua a efi Gerson mu ne, Libni+ abusua ne Simei abusua. Eyinom ne Gersonfo mmusua. 22 Wɔkyerɛw mmarima a ɛwɔ wɔn mu a wɔadi bosome baako rekɔ nyinaa din; wɔn dodow yɛ 7,500.+ 23 Gersonfo mmusua no kyekyee wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan no akyi+ wɔ atɔe fam. 24 Abusuapanyin a ɔda Gersonfo agyanom abusuafi ano ne Lael ba Eliasaf. 25 Adwuma a wɔde hyɛɛ Gersonfo+ no nsa wɔ ahyiae ntamadan no mu ne sɛ wɔbɛhwɛ ɔsom ntamadan no, ne emu ntama,+ ne ntama a ɛkata ho,+ ne ntama*+ a ɛsɛn ahyiae ntamadan no kwan ano, 26 ne ntama* a ɛsensɛn adiwo no ho,+ ne ɔsom ntama*+ a ɛwɔ adiwo no ano, adiwo a ɛwɔ ɔsom ntamadan no ne afɔremuka no ho no, ne ɛho nhama, ne eyinom ho adwuma biara. 27 Mmusua a efi Kohat mu ne, Amram abusua ne Yisar abusua ne Hebron abusua ne Usiel abusua. Eyinom ne Kohatfo+ mmusua. 28 Mmarima a ɛwɔ wɔn mu a wɔadi bosome baako rekɔ nyinaa dodow yɛ 8,600; wɔn na wɔde hyɛɛ wɔn nsa sɛ wɔnhwɛ kronkronbea hɔ.+ 29 Kohatfo mmusua no kyekyee wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan no anaafo fam.+ 30 Abusuapanyin a ɔda Kohatfo agyanom abusuafi ano ne Usiel+ ba Elisafan. 31 Adwuma a wɔde hyɛɛ wɔn nsa ne sɛ wɔbɛhwɛ Adaka no,+ ɔpon no,+ kaneadua no,+ afɔremuka+ a ɛwowɔ hɔ, nneɛma a wɔde som wɔ kronkronbea hɔ,+ ntama* no,+ ne eyinom ho adwuma biara.+ 32 Ɔsɔfo Aaron ba Eleasar+ na na ɔyɛ Lewi abusuakuw mpanyimfo no mu panyin. Ɔno na na ɔhwɛ kronkronbea hɔ adwumayɛfo nyinaa so. 33 Mmusua a efi Merari mu ne Mahli abusua ne Musi abusua. Eyinom ne Merarifo mmusua.+ 34 Wɔkyerɛw mmarima a ɛwɔ wɔn mu a wɔadi bosome baako rekɔ nyinaa din; wɔn dodow yɛ 6,200.+ 35 Abusuapanyin a ɔda Merarifo agyanom abusuafi ano ne Abihail ba Suriel. Wɔkyekyee wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan no atifi fam.+ 36 Adwuma a wɔde hyɛɛ Merarifo no nsa ne sɛ wɔbɛhwɛ ɔsom ntamadan nnua no,+ ne ne mmeamu,+ ne ɛho adum no,+ ne ne nnyinaso, ne nneɛma a wɔde som wɔ hɔ nyinaa,+ ne eyinom ho adwuma biara.+ 37 Afei nso, na wɔhwɛ adum a atwa adiwo no ho ahyia, ne adum no nnyinaso,+ ne nnua a wɔde bɔ ɔsom ntamadan no mu tim fam, ne ɛho nhama so. 38 Wɔn a wɔkyekyee wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan no anim wɔ apuei fam, kyerɛ sɛ, ahyiae ntamadan no anim, baabi a owia pue fi no, ne Mose ne Aaron ne Aaron mma. Adwuma a na ɛhyɛ wɔn nsa ne sɛ wobesi Israelfo no anan ahwɛ tenabea kronkron no so. Obiara a wɔmmaa no kwan sɛ ɔnyɛ bi* no, sɛ ɔbɛn hɔ a, munkum no.+ 39 Lewifo mmarima a wɔadi bosome baako rekɔ a Mose ne Aaron kyerɛw wɔn din de huu nnipa dodow a ɛwɔ abusua biara mu sɛnea Yehowa kae no, wɔn nyinaa dodow yɛ 22,000. 40 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kyerɛw Israelfo mmarima a wɔyɛ mmakan a wɔadi bosome baako rekɔ nyinaa din.+ Kan wɔn, na kyerɛw wɔn din. 41 Fa Lewifo no ma me; mene Yehowa. Fa wɔn si Israelfo mmakan nyinaa anan,+ na fa Lewifo no afieboa mmakan nyinaa si Israelfo afieboa mmakan nyinaa anan.”+ 42 Enti Mose kyerɛw Israelfo mmakan nyinaa din, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ no no. 43 Mmarima a wɔyɛ mmakan a wɔadi bosome baako rekɔ a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa dodow yɛ 22,273. 44 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 45 “Fa Lewifo no si Israelfo mmakan nyinaa anan, na fa Lewifo no afieboa si wɔn afieboa anan. Enti Lewifo bɛyɛ me dea. Mene Yehowa. 46 Israelfo mmakan 273 a wɔboro Lewifo no so no,+ gye wɔn ho agyede+ yi: 47 Onipa baako biara, gye nnwetɛbona anum.+ Susuw nnwetɛbona* no sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.* Dwetɛbona biara yɛ gerah* 20.+ 48 Fa sika no ma Aaron ne ne mma sɛ wɔn a wɔboro wɔn so no ho agyede.” 49 Enti Mose gyee sika a wɔde retua agyede no, na ɔde gyee wɔn a wɔboro Lewifo no so no. 50 Ogyigyee sika no fii Israelfo mmakan hɔ, na onyaa nnwetɛbona 1,365, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no. 51 Na Mose tiee Yehowa asɛm,* na ɔde agyede sika no maa Aaron ne ne mma, sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no.
^ Nt., “de tumi hyɛɛ wɔn nsa sɛ.”
^ Nt., “ɔhɔho biara,” kyerɛ sɛ, ɔbarima a omfi Aaron abusua mu.
^ Nt., “mmakan a wobue yafunu ano.”
^ Nt., “Ɔhɔho biara,” kyerɛ sɛ, obi a ɔnyɛ Lewini.
^ Anaa “sɛnea wobu dwetɛbona kronkron ano no.”
^ Gerah baako yɛ gram 0.57. Hwɛ Nkh. B14.
^ Nt., “ano.”